Is your product Vitamin vs painkillers?
Apr 28, 2020 1 min
ကျွန်တော်တို့ အခုလို Digital ခေတ်မှာ Digital Product တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာအရမ်းမြန်ပါတယ်။ Idea တစ်ခုရတာနဲ့ MVP model နဲ့ Product တစ်ခုအလျင်အမြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီ Covid-19 ကာလအပြီးမှာ Product တွေလည်း တော်တော်များများ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း ကိုယ်ပိုင် Product တစ်ခုစလုပ်တော့မယ် (သို့) Company အသစ်တစ်ခုမှာ Product Manager (PM) အနေနဲ့ဝင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အထက်ကမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြည့်ပါ။ ကိုယ်လုပ်မဲ့ Product ကဘယ်အပိုင်းထဲမှာပါသလဲဆိုတာကို Categorize လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။
Product တစ်ခုစလုပ်ပြီးဆို Problems တွေကို Identify အရင်လုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီ Problems တွေကိုဖြေရှင်းဖို့ Solution တစ်ခုလုပ်၊ အဲဒီ Solution နဲ့ Product တစ်ခုလုပ်ဖို့ Vision၊ Mission တွေချပြီး Market ထဲဝင်လာတယ်၊ ပြသာနာက ကိုယ့် Product က Users တွေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်မနေတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Investor တွေဆီမှာ Pitch လုပ်မယ်ဆို သူတို့လဲ ကိုယ့်ရဲ့ Product က PainKiller (သို့) Vitamin လားဆိုတာ စဥ်းစားမှာပါဘဲ။ ဒါကြောင့်အပေါ်က မေးခွန်းကို ဖြေကြည့်ပါ။
HABIT IS WHEN NOT DOING ACTIN CAUSES A BIT OF PAIN.
Vitamin Product ဆိုတာဘာလဲ?
လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရစဥ်းစားမယ်ဆိုရင် Vitamins ကရောဂါကာကွယ်ဖို့ အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ Vitamins ဟာ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကို အာဟာရဓာတ်တွေပေးနေတာပါ။ မရှိမဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Vitamin Product ဆိုတာလဲ ဒီအဓိပ္ပါယ်ပဲ။ "nice to have" Product တစ်ခုတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ် Market ထဲကကိုယ့် target users တွေရဲ့ Problems တွေကတော့ directly ဖြေရှင်းတဲ့ Product တစ်ခုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ ဥပမာပြောရရင် Personal budget tracker လိုမျိုး app တွေဆိုမရှိမဖြစ်တော့မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ excel နဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ်တာဘဲ ဘာလို့ ဒီလို app သုံးရမှာလဲ? ဝယ်သုံးရမယ်ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ Vitamin Product တွေဟာ Users တွေရဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြသာနာ တွေကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါမေမဲ့ Vitamin ကိုပုံမှန်သုံးဆွဲနေမယ်ဆို ရောဂါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သလို Vitamin Product တွေဟာ Long Terms မှာ အသုံးဝင်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
PainKillers Product ဆိုတာဘာလဲ?
PainKillers ဆိုတဲ့အတိုင်း Pain တွေကိုသတ်ပေးတဲ့ Product မျိုးပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ့် target market မှာ ရှိတဲ့ Pain Points တွေဘာတွေရှိလဲ? ကိုယ့် customers/ potential cutomers တွေ ကကော ဘာတွေခံစားနေရလဲ? သူတို့ရဲ့ pain points တွေကို သိပြီး solution တစ်ခုနဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆို အဲဒါ PainKillers Product ပါ။ သူရဲ့ အားသာချက်ကတော့ လူတွေဟာ Pain တစ်ခုခုဖြစ်နေရင် ဆေးဝယ်သောက်ကြတာထုံးစံဘဲလေ။ ဘယ်သူမှပေပြီးမနေဘူး။ ဒီ Product ကကိုယ့်အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆို usage demand ကတော့ တက်လာမှာအမှန်ဘဲ။ ပြီးတော့ PainKillers Product တွေက Revenues ရှာလို့အရမ်းကောင်းတယ်။
တခြားအနေနဲ့ ဥပမာပြောရရင် ကိုယ်က e-commerce လုပ်တယ်ဆိုပါစို့။ Social Media Platforms တွေအသုံးပြုပြီး sales တွေတက်အောင် marketing team ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ ရဲ့ inbound marketing တက်လာအောင် ဘယ်လို painkillers Solution မျိုးလုပ်ကြမလဲ? စသဖြင့်ပေါ့ စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
Nir Eyal ရဲ့ Hooked: How to Build Habit-Forming Products ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာတော့ Vitamin Product တွေကို Painkillers ဘယ်လို့ပြောင်းမလဲဆိုတာ Hooked ဆိုပြီး အချက် ၄ချက်နဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ Facebook တို့ What's app တို့ဆိုတာတချိန်က Painkillers Product တွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ သူတို့မရှိရင်မဖြစ်သလိုတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး အချက်၄ချက်အောက်မှာရှင်းပြထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။ တကယ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ အချိန်ရခဲ့ရင်လည်း Product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content လေးတွေ ရေးသွားပါဦးမယ်။ အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Cover Photo by Paweł Czerwiński / Unsplash